အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၌ အရည်အသွေးစစ်ဆေးသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အစားအသောက် ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းဓါတ်ခွဲခန်းနှင့် စာကြည့်တိုက် အဆောက်အဦများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ - Food and Drug Administration, Myanmar
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၌ အရည်အသွေးစစ်ဆေးသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အစားအသောက် ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းဓါတ်ခွဲခန်းနှင့် စာကြည့်တိုက် အဆောက်အဦများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်သူအများ အရည်အသွေးပြည့်ဝ၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ အလှကုန်၊ လူသုံးကုန်နှင့်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများရရှိသုံးစွဲနိုင်ရေးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မည့်ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်အဖြေထုတ ်ပေးခြင်းအား မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အရည် အသွေးစစ်ဆေးသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အစားအသောက် ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းဓါတ်ခွဲခန်း (Food Chemistry Laboratory and Molecular Laboratory) အဆောက်အဦများ ဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားကို ဇန်နဝါရီလ (၁၈) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၃၀) နာရီတွင် အဆိုပါအဆောက်အဦရှေ့မြက်ခင်းပြင်တွင်ကျင်းပရာ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၊ နေပြည်တော် ကောင်စီဝင် ဦးတင်ထွန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကျန်းမာရေး၊ အားကစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာစံရွှေဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marcial ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ အငြိမ်းစား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (ကျန်းမာရေး)၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ USP ၊ USAID ၊TPD ၊UNIDO တို့မှကိုယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများ နှင့်ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
အစီအစဉ်အရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၌ အရည်အသွေးစစ်ဆေးသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အစားအသောက် ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာရည်ညွှန်းဓါတ်ခွဲခန်း(Food Chemistry Laboratory and Molecular Laboratory) ယခုကဲ့သို့ တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော United States Pharmacopeia (USP) နှင့် EU GIZ အဖွဲ့တို့အား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဓါတ်ခွဲခန်းကြီးသည် အစားအသောက်နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးပြည့်ဝ၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စစ်ဆေးပေးနိုင်မည်ဟုသိရှိရကြောင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သော အစားအသောက်များဖြစ်စေရန် စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူ အားလုံးအတွက် လွန်စွာအကျိုးရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဓါတ်ခွဲခန်းဖြင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေး သောအခါ United States Pharmacopeia ၏ Standard စံနှုန်းအတိုင်း စစ်ဆေးစေလိုကြောင်းနှင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးသော စံနှုန်း (Standard) ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတွင် ခေတ်မီစာကြည့်တိုက် ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ကြိုဆိုပါကြောင်းနှင့် စာကြည့်တိုက်ကိုအသုံးပြုသည့် အလေ့အကျင့်၊ စာဖတ်ခြင်း၊ လေ့လာ ဆွေးနွေး စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုခြင်း အလေ့အကျင့်များပြုလုပ်ကြပါရန် တိုက်တွန်းပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marcial က အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။
အခမ်းအနားဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဦးတင်ထွန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကျန်းမာရေး၊ အားကစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာစံရွှေဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marcial ၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ပထမဆုံးညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမင်းဆွေ၊ ပထမဆုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာမင်းသန်းညွန့်နှင့်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ချစ် တို့က ဓာတ်ခွဲခန်း အဆောက် အဦအား ဖဲကြိုးဖြတ်၍ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။ ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အဆောက်အဦ ကဗျည်းမော်ကွန်းကြေးပြားအား စက်ခလုပ်နှိပ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးကာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် ဧည့်သည်တော်များက နံသာရည်များ ပက်ဖျန်းကြပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဓာတ်ခွဲခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုပါသည်။ ဆက်လက်၍ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန၊ စာကြည့်တိုက်ကို ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး စာကြည့်တိုက်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှု ခဲ့ ပါသည်။
← ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအမှာစကားပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ကြော်ငြာများ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီညွတ်ရန် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနား (MRTV-4 ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်) →
တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ညွန်ကြားရေးမှူးချူပ်တက်ရောက်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (၂/၂၀၂၀) အစည်းအဝေးသို့ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် တက်ရောက်ခြင်း
တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ(မန္တလေး) သို့ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
One thought on “အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၌ အရည်အသွေးစစ်ဆေးသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အစားအသောက် ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းဓါတ်ခွဲခန်းနှင့် စာကြည့်တိုက် အဆောက်အဦများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ”